शाहरूखका छोरा आर्यनको जमानतका लागि अदालतले राख्यो यस्ता १४ शर्त — Sanchar Kendra
शाहरूखका छोरा आर्यनको जमानतका लागि अदालतले राख्यो यस्ता १४ शर्त
शाहरूख खानका छोरा आर्यनको जमानतका लागि बम्बई उच्च अदालतले १४ वटा शर्त राखेको छ।
शुक्रबार दिउँसो न्यायाधीश एन. डब्लु साम्ब्रेले पाँच पृष्ठ लामो आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै आर्यनका लागि शर्त तोकिएको द वायरले लेखेको छ।
द वायरका अनुसार आर्यनको औपचारिक जमानत भइसकेको छैन। लागुपदार्थ मुद्दामा पक्राउ परेका उनी बीस दिनपछि, बिहीबार मुम्बईको आर्थर जेलबाट बाहिर आएका हुन्। उनको सुनुवाइ चलिरहेको छ। तर शुक्रबार यसबारे औपचारिक फैसला हुन सकेन।
समयमै आवश्यक कागजातहरू पुग्न नसकेका कारण उनको जमानतमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। भोलि शनिबार मात्र उनको जमानतको काम पूरा हुनेछ।
न्यायाधीश एन. डब्लु साम्ब्रेको एकल इजलासले शुक्रबार साँझसम्म फैसला सुनाउने भने पनि कागजात नपुगेकाले प्रक्रिया पूरा नभएको हो।
अर्को सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीका अनुसार आर्यनको पक्षमा बहस गरेका वकिल सतिश मानेशिन्डेले जमानतको आदेशको प्रतिलिपी पाइसकेको बताएका थिए। तर उनले एक लाख भारू वा यो रकम बराबरको दुई ऋणपत्र सुरक्षण बुझाउनु पर्ने थियो। र त्यही प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।
यो प्रक्रिया शनिबार पूरा भए आर्यन औपचारिक रूपमा जेलबाट रिहा हुनेछन्। योसँगै उनले उच्च अदालतले राखेका १४ शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। उनले पूरा गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन्ः
आर्यन अदालतको अनुमतिबिना विदेश जान पाउने छैनन्। उनले आफ्नो पासपोर्ट विशेष अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ। आर्यनले आफ्नो मुद्दासँग जोडिएका अरू आरोपीसँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै विशेष अदालतको कामकारवाही प्रभावित गर्ने प्रयास गर्न पनि पाउने छैनन्।
उनले कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिन पाउने छैनन्। आर्यनले मुम्बई छाडेर बाहिर कतै जानुपरे मुद्दासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
अदालतको सुनवाइमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। आवश्यक परेका खण्डमा जाँचमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक अन्य केही शर्त उनको जमानतका लागि राखिएको छ। उनले यी शर्तमध्ये कुनै एक मात्र उल्लंघन गरे पनि उनको जमानत रिहा हुने सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।